हामी नेपाली समुदायले राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्न जान्दैनौं ।
अनुग्रह विजय मण्डली कपन काठमाडौंका युवा पास्टर सागर परियार गुड् न्यूज एफ. एम. रेडियोमा विगत चार वर्षदेखि धार्मिकताले देश उचाल्छ नामक देशप्रमी रेडियो कार्यक्रमका प्रस्तोता समेत हुन् । उहाँ देशको राजनीतिमा वढी जानकार राख्ने पास्टरमा पर्नुहुन्छ । उहाँ “नेपाली इसाई समुदायले जवसम्म राज्यको हरेक निकायसम्म इसाईहरुको पहुँच पुग्न सक्दैन तवसम्म हामी इसाईलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन ”। नेपालको मण्डली र वर्तमान देशको अवस्था विषयमा उहाँसँग तुरही पत्रिकाले गरिएको वार्ताः
♦अहीले नेपाली मण्डलीको अवस्था कस्तो छ ?
०६२÷०६३ को जन आन्दोलन पछाडी नेपाली मण्डलीको अवस्थाको कुरा हो भने । नेपाली मण्डलीमा एकातिर धेरै मण्डलीहरु विभाजन भए भने अर्कातिर प्रभुको अनुग्रहको कारण नेपाली मण्डली स्थिर नै छ । दशवाह् वर्षसम्म देश गृह युद्धमा होमिदा हाम्रो नेपाली मण्डलीलाई पनि यस्को प्रत्यक्षरुपमा असर प¥यो । नेपाली मण्डली पनि त्यसवाट अछुतो रहन सकेन । आफ्ना अधिकारका लागि मण्डलीमा पनी मण्डलीका सदस्यको वोल्ने वानीको विकास भयो ।
♦०६२/०६३ को जन आन्दोलन पछाडी देश धर्म निरपेक्ष घोषणा भयो झन मण्डलीलाई सजिलो हुनुपर्ने किन विभाजन भए मण्डलीहरु ?
हामीले यहाँ वुझनु पर्ने कुरा के हो भने राज्यको कुनै विशेष धर्म हुँदैन भनेको हो ।राज्यले कानुनमा समेत धार्मीक स्वतन्त्रता खुकुलो पारेको अवस्थामा हामी नेपाली इसाइहरु झन सवै एक भएर यस्को फाइदा लिन सक्नु पथ्र्यो । यो जन आन्दोलन पछि आम नेपाली मानसिकतामा पनि परिवर्तन आयो । जस्ले जे भन्दा नी हुन्छ र जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराले नेपाली समुदायमा प्रश्रय पायो । त्यही कुराले नेपाली मण्डलीलाई पनि अछुतो राख्न सकेन । फलस्वरुप नेपाली मण्डलीमा पनि स्वतन्त्रताको महसुस आवश्यक्ता भन्दा वढी नै गरियो । त्यसकै परिणाम हो आज नेपाली मण्डलीहरु विभाजन र टुक्रिएका ।
♦देश धर्म निरपेक्ष भएपछिका वर्षहरूमा कुन धर्मावलम्वीहरूकालाई वढी फाइदा पुग्यो ?
हेर्नुहोस् राज्यले धर्म निरपेक्ष देश घोषणा ग¥यो तर धर्म निरपेक्ष भनेको के हो भन्ने कुरालाई राज्य आफैले आम नेपाली जनतालाई वुझाउन सकेन । राज्यले धर्म निरपेक्ष घोषणा हामी इसाईका लागि त उसको कागजमा मात्र सीमित छ । के छ भने धर्म निरपेक्ष भनेको छ सम्माननीय राष्टपतिज्यू आफैं इन्द्रजात्रा, भोटेजात्रा वा अन्य ए वि सि जात्रामा पनि जानुहुन्छ । तर हाम्रो इसाइहरुको क्रिशमसमा आउन मान्नुहुन्न । खोइ कहाँ छ हाम्रा लागि धर्म निरपेक्ष ? त्यसैले राज्यले हामी इसाईहरुलाई गर्ने व्यवहार जस्ताको तस्तै छ । कागलाई वेल पाक्यो हर्ष र विषमात जस्तै भएको छ हामी इसाईलाई । राज्यवाट दिने सेवा सुविधाका कुराहरु खोइ कहिले पाए इसाईहरुले ? इस्लामिक धर्मको हज मान्न कतार जान लागेकालाई सरकारका प्रमुख व्यक्तिहरु विदाइ गर्न एयरपोर्टमा जान्छन ।राज्यले कुनै एक धर्म समुदायको लागि परम्परा देखि रकम छुटयाउदै आएको छ तर आज नेपाली इसाई समुदायले शान्तिपूर्ण तवरले मर्दाखेरी चिहान गाड्ने जमिन उपलव्ध गराउ भन्दा त अहिलेसम्म वास्ता गरेको नै छैन सरकारले । अव तपाईं आफैं भन्नुहोस् धर्म निरपेक्षताले कुन धर्म सम्प्रदायलाई फाइदा भयो ?
यो देशमा करिव २० लाख इसाईहरू छौ, यत्रो जनसँख्या भएको देशमा राज्यले कहिल्यै हाम्रा आधारभुत आवश्यकताहरु पनि पु¥याउन सकेन । त्यसैले धर्म निरपेक्ष भएर वा सापेक्ष भएर हिजो जुन समुदायलाई फाइदा भएको थियो आज पनि ती समुदायलाई मात्र फाइदा पुगेको छ । इसाईहरूका लागि यो देशमा धर्म निरपेक्ष आइसकेको छैन् ।
♦हाम्रो पनि कमजोरी होला नी त ! हाम्रो हक अधिकारका लागि हामीले राज्यसँग माग्न जानेनौ कि ?
हो एउटा कारण यो पनि हो । हामीले आफ्ना अधिकारका लागि राज्यसँग माग्न जानेका छैनौं र अहिलेसम्म पनि असल प्रकारले माग्न पनि जानेनौं । उदाहरणको रुपमा पशुपती विकाश कोषले जव वनकालीमा इसाईहरुका मृत लासलाई दफन गर्न नपाइने भनी निर्णण ग¥यो तव हामीले त्यहाँ दफन कार्य हाम्रा लागि रोकियो । त्यही समयमा किराँत समुदायलाई पनि त्यहाँ दफनका लागि प्रतिवन्ध गरियो । तर किराँतहरुले त्यहाँ सशक्त आन्दोलन गरेपछि, सरकार वाध्य भयो उसले गरेको निर्णय फिर्ता लिन । उनीहरुले पछि त्यहाँ दफन गर्न पाँए । उनीहरुका लागि रोकिएन । किराँत समुदायले त्यही ठाउँमा दफन गर्न पाउँछ तर त्यही ठाउँमा इसाई समुदायले दफन गर्न नपाउने कतिसम्मको अन्याय हो यो राज्यको इसाईहरुलाई गरेको ?
♦हामी इसाईहरू किन यती कमजोर भयौ त ?
वास्तवमा हामी नेपाली इसाईहरू हामी नेपाली हौं भन्ने कुरा नै वुझन सकेनौ । बाइबलले हामीलाई राज्यले दिएको स्वतन्त्रतालाई सदुपयोग नगर र सुविधालाई उपयोग नगर त भनेको छैन नी । यसकारण हामी सवै इसाईहरुले हामी यसै देशको नागरिक हुँ भन्ने कुरा वुझनु प¥यो । हामीहरूको भोटले गर्दा नै यो देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भएका हुन र हामीले दिएको राजस्वले नै देश संचालन भएको भन्ने कुरा जवसम्म इसाई समुदायले वुझदैन नी तवसम्म हाम्रो अवस्था त्यस्तै हुनेछ ।
♦किन वुझाउन सकिएन जस्तो तपाईलाई लाग्छ ?
सुरूसुरूमा यो देशवाट इसाईहरुलाई देश निकाला पनि गरियो । त्यतीवेला देखि हाम्रो समुदाय अपहेलित समुदाय भयो । ०४६ साल अघिसम्म त हामीले आफ्नो अधिकार माग्ने कुरा त छोडौं, आफू इसाई हुँ भन्ने स्थिति थिएन । परिचय लुकाएर हिड्नु पर्ने अवस्था थियो । चर्चमा अधिकारका लागि लड्नुपर्छ भन्ने सिकाउन सक्ने वातावरण अनुकुल भएन । ०४६ साल पछिको प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली पछि देशमा भएका इसाईहरु आफ्नो अधिकार भन्दा पनि मण्डलीलाई सुसज्जित पार्नमा लागि प¥यो । हुँदाहँदा देशमा लोकतन्त्र पछि गणतन्त्र पनि आयो । तर हामीले अझ पनि आफ्ना अधिकारका लागि माग्न जानेका नै छैनौ । त्यती वेलाका हाम्रा मण्डलीका अगुवाहरुले हामीले सरकारको विरोध गर्नुहुँदैन, प्रार्थना मात्र गर्नुपर्छ, हामी अधिनमा वस्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाए । त्यो नै उनीहरुको महानता थियो ।
♦त्यसोभए इसाईका लागि देशमा धर्म निरपेक्ष छ भन्नु लज्जास्पद भइरहेछ है ?
हो ठीक भन्नु भयो । मलाई यो देशमा केही अप्ठयारो भएको छ भने त्यो होः म इसाई भएर मैले येशूलाई विश्वास गरेर हो । मैले मद्दपान, धुमपान जस्त अमली मैले सेवन गर्न छोडे । समाज र देशको हितकारी काम मात्र म गर्छु तर पनि समुदाय मेरो विरुद्धमा छ, किन छ भन्दा म इसाई भएको कारणले हो ।
नेपालमा भएका इसाई संघसंस्थाहरुले के समाजीक विकाशको काम नगरेका हुन र ? यहाँ इसाईले गरेको देखिने कामको समेत चर्चा हुँदैन, नदेखिएका काम त कति छन कती ।
♦यस्तो खालको अपहेलना समाज र राज्यवाट नेपाली इसाईहरुले कहिलेसम्म सहिरहने ?
जवसम्म राज्यका हरेक निकायहरूमा इसाईहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन र सदनमा समेत हाम्रा मानिसहरुको सहभागिता हुन सक्दैन नी, तवसम्म राज्य र समुदायवाट यो खालको अपहेलना हामीले सहीराख्नु पर्ने वाध्यता रही रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । पहिले हामीले आफ्नो परिचय लुकाउनुपर्ने वाध्यता थियो तर अव समयले कोल्टे फेरेको छ । देश धर्म निरपेक्ष भएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता कायम छ । यस्तो वेलामा हामी नेपालका सम्पूर्ण मण्डलीहरु एक भएर हाम्रा साझा अधिकारका लागि राज्यसँग माग्ने वेला भएको छ ।
♦इसाईहरु देशको खुल्ला राजनीतिमा जानु अहिलेको आवश्यक्ता हो ?
राजनीतिविना देश संचालन हुन सक्दैन भन्ने हामीले वुझनु पर्छ । देशको मूल राजनीतिमा तलमाथि केही हुँदा तपाई हाम्रो दैनिक जीवनमा असर पर्छ भने देशको राजनीतिले हाम्रो मण्डलीलाई किन असर पार्दैन र ? जुन देशमा राजनीति स्थिर हुन्छ त्यो देशलाई हेरौ न, भारत, अमेरिका,द.कोरीया, चाइनाजस्ना विश्वका अथतन्त्र वलियो भएका राष्ट्रहरु हुन् । त्यो देशमा राजनीतिक स्थिरता छ । देशमा विकाश तीव्र गतीमा भएको छ । हामी इसाई समुदायले राजनीतिलाई फोहोर खेल भनेर नवुझौं । जवसम्म फोहरलाई सोरेर फाल्न सक्दैनौ भने हामीले त्यहाँ फोहोर छ भनेर टीका टिप्पणी गर्ने अधिकार पनि छैन । देश डुव्नै लाग्दा हामी हेरेरै मात्र वस्नु हुँदैन । आवश्यकता अुनुसार देशको खुल्ला राजनीतिमा पनि हामी जानुपर्छ ।
♦पास्टरले कुनै दल खोलेर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्छन नी त ?
विचित्रको कुरा के छ भने नी, पास्टर भन्ने पदलाई त्यसरी वुझनु हुँदैंन । पास्टर एउटा चरुवा हो । पास्टरलाई सवै कुराको समाधान गर्ने अधिकार छ । उ शिक्षक, प्रचारक र लिडर हो । पास्टर एउटा यस्तो व्यक्ति होः जसले समुदाय, स्थनीय निकाय र राज्य संचालन गर्न सक्ने जिम्मा लिनुसक्नु पर्छ । अमेरिकाको सदनमा त्यहाँ पास्टरको सहभागिता रहन्छ भने हाम्रो देशको सदनमा किन नेपाली पास्टरहरुको सहभागिता हुँदा के फरक पर्छ र ? पास्टर आफैंले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्छन भने पास्टरले राजनीति गर्ने वोलावट भएका राजनेता मण्डलीमा निमार्ण गर्नु प¥यो नी त ।
♦मंसिर ४ गतेको संविधान सभाको दोस्रो निर्वानचनमा इसाईले आफ्नो मतको कसरी प्रयोय गर्ने ?
संविधान सभाको दोस्रो चुनावको मिति तय भएको छ । यती वेला पनि हामी इसाई समुदाय सुतेर वस्यौ र हाम्रो इसाई समुदायको हक र अधिकारका लागि अव पनि हामीले अवको संसदमा निर्वाचनद्धारा हाम्रा प्रनिनिधिलाई उम्मेदार उठाएर संसदमा पठाएनौ भने हामी नेपाली इसाई समुदायलाई ठूलो घाटा हुने निश्चित छ । विभिन्न दलका नेताहरुलाई भेटी हाम्रो पक्षमा देशका दशौ लाख इसाईको मत छ, यदी हामीलाई तिमीहरुको दलमा सामेल गरेर लिनुपर्छ भन्ने माहोल सिर्जना गर्ने तिर हामी लाग्नु पर्छ । तवमात्र हाम्रो समुदायको संसदवाट अधिकारका लागि अघि वढ्न सक्छौ । यो देश इसाईको पनि हो । यो देशमा भएका दशौ लाख इसाईको मतलाई यस पालीको निर्वाचनमा सदुपयोग गर्न सकेनौ भने हामीलाई यस्तो सुनौलो अवसर इतिहासमा कहिल्यै आउन सक्दैन ।